Top Ties Manufacturers na Suppliers | China Top Ties Factory
Top agbatị na-iji kwekọọ n'isi, n'olu nke polima insulators, poselin insulator, post-ụdị insulators na-eduzi etinyere, site n'elu n'akụkụ insulator. Insulator n'elu tie na-eji maka ọtọ efe n'elu bundled eduzi na MV na HV ike nnyefe netwọk. Kee n'elu maka polima insulator na-mere nke aluminum kpuchie ígwè, aluminum ihe. Ihe nke heliformed n'elu agbatị na-adabere na ihe onwunwe ụdị-eduzi ya aka etinyere na, ACCC ma ọ bụ ACSR. Preformed tie n'elu insulator Ọzọkwa onwem na rịbọn rube ka ibelata abrasion nke eduzi na insulator.
Jera mkpụrụ waya kpụrụ insulator n'elu agbatị nke ndị na-esonụ ụdị: n'elu tie wraplock, top tie ejima (abụọ support tie). Ma ụdị helical n'elu agbatị enye mma usoro nke ichebe cable, tụnyere n'aka tie n'elu akara n'echebe mkpara
The pụrụ iche, onye-ibe imewe enweghị ihe ọ bụla bolts ọ bụ elu-nrụgide na-ejide ngwaọrụ ekwe nkwa mfe echichi na ogologo ndụ oge nke preformed insulator n'elu agbatị.
Jera bụ ike ịzụlite preformed erughị ala grips na preformed n'elu agbatị dị ka gị cable nkọwapụta, insulator n'olu dayameta na anya n'etiti okporo osisi ya.
Mmadụ Bịa ka kpọtụrụ anyị.